မြေပုံဆွဲခြင်း - Geofumadas
Thetruesizeof လို့ခေါ်တဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကွန်ယက်ထဲကိုရောက်နေတယ်။ အလွန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ - အသုံးပြုသူသည်နိုင်ငံတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအကြားမျက်နှာပြင်ofရိယာကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဤအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သင်၌ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်။
UNIGIS ကမ္ဘာ့ဖိုရမ်၊ Cali ၂၀၁၈ - သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုအသွင်ပြောင်း။ ပြောင်းလဲစေသော GIS အတွေ့အကြုံများ
UNIGIS လက်တင်အမေရိက၊ Universität Salzburg နှင့် ICESI တက္ကသိုလ်တို့ကိုယခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောဇိမ်ခံကားအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ UNIGIS WORLD FORUM ပွဲဖြစ်သည့် Cali 2018 - GIS ၏အတွေ့အကြုံများကိုနိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်သောကြာနေ့တွင် ICESI တက္ကသိုလ် - Cementos Argos ခန်းမ၊ Cali၊ ကိုလံဘီယာ။ အသုံးပြုခွင့်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါ…
ArcGIS-ESRI, Cartografia, CAD / GIS ဆုံးမဩဝါဒပေး, geospatial - GIS
EOS သင် browser မှာ image processing တွင်တာဝန်များကို run ပေးနိုင်ပါတယ်
EOS Platform ကြောင့် Erdas Imagine သို့မဟုတ် ENVI ဆော့ဖ်ဝဲလ်များလိုအပ်သောပုံရိပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအလုပ်အများစုသည်ယခုအခါတွင်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ EOS Data Analytics မှ GIS ပညာရှင်များအားစတင်မိတ်ဆက်ပေးသောဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော cloud service သစ်သည်ကြီးမားသောရှာဖွေမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့်မြင်ကွင်းများအတွက်ပြည့်စုံသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင်သောအခမဲ့ - UTM ကိုသြဒီနိတ်ကိုပထဝီအနေအထားသို့ပြောင်းလဲရန်ပုံစံ
ယနေ့ GIS Web ကိုလျှောက်ထား၏များစွာသောဖြစ်နိုင်ချေ
ယနေ့မှတ်ချက်ပေးရန်ခေါင်းစဉ်မှာ Web GIS ဖြစ်သည်။ 'uninitiated' အတွက်၎င်းကို 'GIS on the Web' အဖြစ်သာပြန်ဆိုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ၎င်း၏နယ်ပယ်ကဘာတွေလဲ။ ဤစာမူ၏ခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအဘယ်ကြောင့် 'လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်'? အဲရစ်ဗန်ရိစ်ကိုအသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းငါးခုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Twilight စကေး
ဤသည် MundoGEO မဂ္ဂဇင်းတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် Regis Wellausen ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ် (၂၀) ​​ကပြသခဲ့သော Catastro -2014 ကြေငြာချက်များသည်အထူးသဖြင့်ရိုးရာကာတွန်းရုပ်ပုံများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်မော်ဒယ်လ်နှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ အိုမင်းခြင်းပါရာဒိုင်းကိုအစားထိုးရန်အနေအထားဖြင့်ဖြေရှင်းရန်အဆိုပြုချက်။
thetruesize.com သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော site တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်နိုင်ငံများကို GoogleMaps ကြည့်ရှုသူ၌တည်နိုင်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုဆွဲယူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်နိုင်ငံများနှင့်လတ္တီတွဒ်ကွာခြားမှုနှင့်မည်သို့ပုံပျက်နေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း cylindrical projection သည်လေယာဉ်ပေါ်တွင် projection ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ ...
Maps ကို OpenLayers
Cartografia, Google Earth / Maps ကို
download ပြုလုပ်ရရှိနိုင် 25,000 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြေပုံ
Perry-Castañedaစာကြည့်တိုက်မြေပုံစုဆောင်းမှုသည်မြေပုံ ၂၅၀,၀၀၀ ကျော်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ဖတ်ရှုပြီးရရှိနိုင်စေရန်စုဆောင်းထားသည့်စွဲမှတ်ဖွယ်စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြေပုံအများစုသည်အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် ၂၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့် ... မြေပုံများကိုပြသထားသည်။
Cartografia, CAD / GIS ဆုံးမဩဝါဒပေး, အင်တာနက်နှင့်ဘလော့များ
ဂူးဂဲလ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောတစ်နေ့တာသမိုင်းဝင်မြေပုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်၊ ထိုမျှမကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာဒေသသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်မြေပုံနည်းပညာက၎င်းကိုဖွင့်ထားသည်။ သွား! ဘယ်လိုလဲ။ ဤဥပမာသည်လန်ဒန်၏လွမ်းဆွတ်မှုမြေပုံဖြစ်သည်။
Cartografia, geospatial - GIS, Google Earth / Maps ကို
နောက်ဆုံးပေါ် National Geographic ထုတ်ဝေမှုကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင်လေဆာဖမ်းယူမှုစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အမွေအနှစ်ပုံစံချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျယ်ပြန့်သောအစီရင်ခံစာ။ ၎င်းသည်တောင်ဒါကိုတာရှိ Rushmore တောင်၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်ကိုရှင်းပြသည့်စုဆောင်းသူ၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်။